Haezer Art Album Art - Imewe Mmewe
Art Album Art
Art Album Art A maara Haezer maka ụda ya bass siri ike, Epic break with effects polured well. Thedị ụdị ụda a na-apụta dị ka egwu na-aga n'ihu n'ihu, mana na nyocha dị nso ma ọ bụ na-ege ntị ị ga-amalite ịchọpụta ọtụtụ usoro ugboro ole dị na ngwaahịa a rụchara. Maka echiche okike na igbu ihe ịma aka bụ ịme ka ahụmịhe ọdịyo a maara dị ka Haezer. Artzọ ndị a na-ese n’eghị abụkarị ụdị egwu a na-agba egwu, yabụ na-eme Haezer ụdị nke ya.
Aha oru ngo : Haezer , Aha ndị na-emepụta ya : Chris Slabber, Aha onye ahịa : CS Design & Illustration.
Art Album Art Chris Slabber Haezer